Mouse for gamers - Talooyin - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » QODOBO »Mouse for gamers - Talooyin
Ku darida muhiimka ah ee kumbuyuutarka, jiirka ayaa ah midka ugu sahlan ee hiwaayadda ciyaaraha fiidiyowga. Haddii ay noqoto mid raaxo leh, oo aan daalin inta lagu jiro ciyaaraha dheer, waa inay sidoo kale noqotaa mid sax ah, oo dhakhso ah oo lagu dhajin karo, si ay ula qabsato xaalado kala duwan. Si dhaqsi ah, ma jirto wax suurtagal ah in la isticmaalo habka caadiga ah ee maareynta xafiisyada xafiisyada: gamers waxay ubaahan yihiin jiirka loogu talagalay cayaarta.Hooyo, nooc kasta oo cayaaruhu leeyahay shuruudaha u gaarka ah, waxaa jira jiir gaar ah qayb kasta oo weyn: FPS (qofkii ugu horreeyay ee rasaastu qofkii ugu horeeyay ee toogta ama qofka toogta hore), MOBA (farshaxan bilaash ah oo internetka ah ama jimicsiga cayaaraha internetka ee multiplayer) iyo MMORPGs (cayaarta ciyaaraha kubadda badan ee kubadda cagta ee kubadda cagta ama cayaaraha kubbadda badan ee kubbaddaageedka ee online-ka ah), ayaa sidoo kale loogu yeeray MMO.
Soo-saareyaasha ayaa waxan gartaan, oo waxaad bixisaa lagu daydo ku haboon nooc kasta khubaro, ama wax yar ka badan guud ee bilowga ah, oo leh naqshado geesi, qaraarada sare, giraangiraha fullaaci kara, dioska- RGB ama badhamada badan programmable . Halkan waxaa ku xulashada of jireen jiirarkii for aanu arintii, ugu caansan ee la joogo, wireless, iyo qiimaha.
Miisaanka ciyaaraha guud
89,99 €54,90 €ISTICMAAL MUHIIMon Amazon
Xoog, macquul ah oo qurux badan, cirbadda bukaanka ah ayaa ah tixraaca ka mid ah ciyaartoyda. Iyada oo shidma nooca Hero oo hubisaa saxnaanta u fiican (dhibco 16000 per inch), 11 badhamada ay programmable, roulette hyper-soomi boggan dual-hab ay, nalalka customizable dioska- ay RVG, guga shido ay si farsamaysan iyo muraayadaha biraha ee isku dhafan ee saxda ah iyo bidixda iyo habka miisaanka si loo hagaajiyo miisaanka, waxay ku habboon tahay dhammaan noocyada ciyaaraha iyo ciyaartoyda.
Naasnuujinta farshaxan ee farshaxan
89,90 €68,45 €ISTICMAAL MUHIIMon Cdiscount
Ku rakibay tiro cajiib leh oo ah barnaamijyo la iskudhicili karo dhinaca, farkeetkaan cirbadda leh ee saxda ah (16000 dhibcaha halkii inch) ayaa iftiiminaya qaabkiisa. Xaalad aad u firfircoon (jawaab celin ka yar 1 ms), waxay u dhaqmi kartaa dhammaan xaaladaha u baahan xawaare aad u ba'an. Nidaamka kumbuyuutarka ee muhiimka ah ee Key Slider wuxuu bixiyaa suurtagalnimada habdhaqanka ah ee qaabka cayaaraha iyo afarta qaybood ee RGB nalalka iftiinka wuxuu ku darayaa madadaalada ciyaarta.
Muuqaalka ciyaarta ee MOBA / MMO
94,99 €ISTICMAAL MUHIIMon Amazon
Furaha farsamooyinka farsamooyinka leh ee sumcad ku leh Razer, mashiinka wired oo leh xalka sare (16000 dhibcaha hal mitir) oo ku habboon MOBA iyo MMO waxa ay ku kala duwan yihiin barnaamijka 19 ee barnaamijyada la adeegsan karo, gaar ahaan, saddexda tumeen kooxda laysku beddelid karo la gaadmada badan ee badhamada u ogolaanin in ay si fudud u qabsadaan si noocyada kala duwan ee kulan.
Muuqashada ciyaaraha ee FPS
39,99 €28,49 €ISTICMAAL MUHIIMon Amazon
Si gaar ah loogu talagalay FPS, cirbadda bukaanka ah waxay leedahay muuqaal sarreeya, jawaab-celin sare (TrueMove1 ilaa 7200 CPP iyo 240 IPS) oo siinaya xawaare aad u qoto dheer oo lagu wajihi karo wajiyada dagaalka. Isticmaalka alaabaha miisaanka yar oo aalladda degdeg ah, waa mid aad u wacan in ay la tacaalaan, gaar ahaan sida ay qaab ergonomic ayaa loogu talagalay righties. Waxay leedahay lix badhamada (midig iyo bidix ayaa la hubaa inay 30 million qasabno) iyo nidaamka nalalka Waxyeelo multicolor RGB ah.
Moodhadhka wireless gamer ee FPS
149,00 €137,63 €ISTICMAAL MUHIIMon Amazon
Nidaamkaba si dhammeystiran, cirifka numbarkani wuxuu damaanad qaadayaa falcelin sarreeya iyo saxnaantiisa aad u sarreeya iyada oo ay ugu wacan tahay dareenkiisa Hero taasoo ku siineysa waqtiga jawaabta 1 ms iyo xalka 16000 dhibcaha hal mitir. Nalalka dheeraadka ah (80 g), waxa uu leeyahay badalado bidix iyo midig sax ah iyo batterigeedu wuxuu siiyaa madaxbannaan saacadaha 48 leh nalalka iyo saacadaha 60 aan lahayn iftiin.
Miisaanka guud ee ciyaaraha wireless
99,99 €ISTICMAAL MUHIIMon Cdiscount
Waxaa saxiixay mid ka mid ah takhasuska ee hormuudka ka ah accessories ciyaarta, taas mouse wireless ku haboon yahay nooca kala duwan ee kulanka mahad ay design ergonomic, saxnaanta aad u sarreeya (dhibco 16 000 per inch) iyo 1 waqtiga jawaabta Ms. Light ku filan (112 g), oo aad u raaxo, waxa uu leeyahay faa'iidooyinka ah isagoo ambidextrous, iyadoo qaab ku haboon labada midig iyo gacantooda bidix. Its batari 800 Mah hubisaa madaxbannaani saacadaha 24 la saamaynta nalalka shaqeysiin - iyo toban saacadood oo dheeraad ah oo aan saamayn.
Miisaanka laser-sensor gamer
49,95 €ISTICMAAL MUHIIMon Amazon
Iyada oo 13 badhamada programmable ah oo miisaankiisu yahay hagaajin, design ergonomic iyo shidma laser sax sare (dhibco 12 000 per inch), taas mouse wireless ku haboon yahay labada FPS iyo MMO sida MOBA. Waxay xitaa leedahay habka nacasta, si dhakhso ah uga jawaabto ciyaaraha hore, iyo diirada RGB, si loogu daro jawi dhalaalaya.
Ciyaarta Gamer ee Bilowga
19,99 €11,99 €ISTICMAAL MUHIIMon Amazon
Aan iska leh moodooyinka qaalisan tartamaan, this mouse St Paul ogolaanaya qiimo yar si aad u hesho galay ciyaarta video ah oo aan jabiyay bangiga. Iyada oo ay 1000 xalinta hagaajin karo in 5500 dpi, badhamada ay weerarka iyo dib u socon, daahan a textured iyo qaabka ergonomic, waxay bixisaa more raaxo, shaqo iyo sax ahayn mouse desktop caadiga ah iyo ku filan si ay u bilowdo. Best of dhan, waxa uu xitaa midab Kokes!